लाेकमान जाेगाउन सक्रिय यी हुन् कांग्रेस नेता « Deshko News
लाेकमान जाेगाउन सक्रिय यी हुन् कांग्रेस नेता
काठमाडाैं, कार्तिक ५
अख्तियार प्रमुख लाेकमानसिंह कार्कीलार्इ जाेगाउन कांग्रेसका केही हस्तीहरु पुरै लागेका छन् । संसदमा महाभियाेग दर्ता भएकाे र पुरै लाेकमानकाे विराेधमा समाज एकाेहाेरिरहेकाे बेला कांग्रेसमा माथि तस्बिरमा उल्लेखित नेताहरू कुनै हालतमा उनीमाथि कारवाही गर्न नहुने लबिङमा छन् । निलम्बित प्रमुख आयुक्त कार्कीका पक्षमा सबैभन्दा खुलेर गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी लागेका छन् ।
निधीले विषायान्तर गर्नका लागि एमालेले सरकार ढाल्ने अस्त्रका रुपमा प्रचण्डलाई फँसाएको हो, उनलाई थाहै थिएन भन्दै कांग्रेसका नेताहरुलाई सशंकित बनाइरहेका छन् । निधीलाई साथ दिन अग्रपंक्तिमा देखिएका अर्का नेता हुन् डा. रामशरण महत । कम्युनिस्टहरुले कांग्रेसलाई जालमा पारे भन्दै उत्तेजित बनाउने र कार्कीलाई जोगाउने अभियानमा उनी सक्रिय छन् । विहीबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनले त्यही आशयमा धारणा राखेका थिए ।
लोकमानका पक्षमा लबिङ गरिरहेका अर्का नेता डा. मीनेन्द्र रिजालको तर्क पनि निधीकै जस्तो छ– प्रस्ताव पारित भयो भने एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउँछन्, हामीलाई बाहिर फाल्छन् । तिनीहरुका साथै अर्जुननरसिंह केसी, गुरुराज घिमिरे, एनपी साउँद, रमेश लेखकलगायतका नेताहरुले पनि लोकमानको बचाउ गरिरहेका छन् ।
चैतमा प्रधानमन्त्री हुने गरी माओवादीसँगको भएको सम्झौता बीचैमा तुहिन्छ कि भनेर सशंकित देखिएका देउवा त्यसमा आश्वस्त हुनासाथ कार्कीलाई हटाउन तयार हुने बुझाइ माओवादीवृत्तमा छ ।